Lawula ixesha levidiyo ngeAdobe Premiere | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Izixhobo zoYilo, Amaqhinga, Tutorials
Lawula ixesha levidiyo kunye neAdobe INkulumbuso ukwenza iividiyo zoyilos kwisitayile esinyulu sobungcali apho Ukudibanisa isantya sevidiyo ezahlukeneyo ufumana iziphumo ezinomtsalane kakhulu. Dlala ngexesha lamavidiyo akho ukwenza enye indlela enamandla kwaye ufezekise iziphumo ezintle.
Ngendlela elula kakhulu oya kuyifumana funda indlela yokwenza ixesha lokudlala iividiyo zakho Inkulumbuso, kwangaxeshanye uyakuchukumisa ezinye iikhonsepthi ezisisiseko malunga nokuhlelwa kwevidiyo ngale nkqubo yobungcali. Ixesha lenkosi, ukuhlela ividiyo kakuhle enkosi kwiindalo.
Ixesha lokulandela kunye neAdobe INkulumbuso kubalulekile ukuba sifuna ukufezekisa ezahlukeneyo kunye nokuhlelwa kwevidiyo ukukwazi ukudlala ngesingqisho somgangatho wevidiyo, ngaloo ndlela sifezekise iziphumo ezinomtsalane ngakumbi kwiiprojekthi zethu zokumamela. Ngamaxesha amaninzi kuya kufuneka senze olu hlobo lweziphumo kuba yinto esetyenziswa kakhulu kwihlabathi labaphulaphuli, ukucotha ixesha, ukukhawulezisa nazo zonke iintlobo zotshintsho ezinxulumene nexesha levidiyo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukudala esi siphumo sinomdla kukuvula iprojekthi kwi INkulumbuso ngeevidiyo esiza kusebenza ngazo.
Nje ukuba ivulwe ividiyo Inkulumbuso, into ekufuneka siyenzile yile yenza ukhetho lweziqeshana kwezi vidiyo.
Eyona ndlela ilungileyo yenza ukusika kwividiyo Phambi kokuba sidlule kumda wexesha kuba sifumana Coca ividiyo ngaphambili. Ukwenza oku Ukucoca kwangaphambili into esiyenzayo licandelo levidiyo kabini konqakrazo Ukusuka kwindawo esezantsi, nje ukuba kwenziwe, kwicandelo eliphezulu levidiyo iya kuboniswa, kulapho siza kwenza khona ukusika ngokucofa iinketho ukungena (ukuqala) kunye nokuphuma (ukuphela) Ukudlala ngezi ndlela zimbini, sikhetha iinxalenye zevidiyo yethu esinomdla kuyo, xa sigqiba siyitsalela kumda wexesha ngokucinezela umboniso wevidiyo. Kwimeko yokuba nevidiyo kumgca wexesha, into esiyenzayo kukushiya eli nyathelo uye kwelandelayo.
Sirhuqa ividiyo yethu kulayini wexesha kwaye siqala ngenkqubo ekhethekileyo yokukhetha ukudlala ngexesha levidiyo. Singayibona ngcono ividiyo ukuba sihambisa ibar emazantsi omda wexesha.
Nje ukuba sibe neevidiyo zethu kumda wexesha, into elandelayo esiza kuyenza kukuqala ukuzisika, kuba oku kufuneka sisebenzise isixhobo blade. Siqala ukusika iziqwenga zevidiyo naphina apho sifuna khona tshintsha isantya sevidiyo.
Emva kokwenza ukusika kuya kufuneka sicofe iividiyo ngeqhosha lasekunene kwaye ukhethe i ukhetho isantya / ubude bexesha. Kuxhomekeke kwinto esiyikhangelayo siya kuguqula isantya sevidiyo ngandlela thile, ukuba sifuna eso siqwenga sibe nesantya esisezantsi kufuneka Yongeza ixesha lexesha yevidiyo kwaye ukuba sifuna ukuba ikhawuleze kufuneka nciphisa ixesha layo.
Singafaka isicelo ukubuyisela umva isiphumo ngokukhawuleza okukhulu ngokulandela amanyathelo afanayo njengangaphambili kodwa endaweni yokutshintsha kuphela isantya sevidiyo, sikhetha ifayile ye- ukhetho lokuguqula isantya. Emva koku, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqhubeka nokusebenzisa konke ukusikwa kunye neziphumo esizifunayo kwividiyo yethu.
Lawula ixesha levidiyo yinto esetyenziswa kakhulu kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi ze-audiovisual, ukusuka kwi-cinema ukuya kwividiyo, olu hlobo lokuhlela lube enomtsalane ebonakalayol. Ngoku enkosi INkulumbuso kunye nokuhlangana kwayo kakuhle sinokwenza olu hlobo lweziphumo zobungcali ngokukhawuleza okukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Lawula ixesha levidiyo ngeAdobe Premiere